🔥Stanozolol (Winstrol): Para ganhos secos e aumento da definição - Suplementos Brasil
🔥Stanozolol (Winstrol): Ho an'ny tombony maina sy ny famaritana bebe kokoa
11 Jona 2021
Stanozolol dia anisan'ny sokajy steroid anabolika malaza indrindra sy be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao, vokatra iray izay mifandraika indrindra amin'ny fahatsoran'ny fahazoana azy io ary koa amin'ireo vokany tena mahaliana amin'ny fivoaran'ny vatana. Jereo eto ambany ireo inona ny toetra mampiavaka an'io anabolika io ary ny fomba fampiasan'ny fampiasana azy eo amin'ny zava-bita sy ny fahombiazany, ny fiatrehana ireo tombontsoa lehibe sy ny voka-dratsy ateraky ny fampiasana zava-mahadomelina.
Raha tsy misy isalasalana ny iray amin'ireo steroid anabolika mahazatra indrindra sy be mpampiasa indrindra dia ny Stanozolol, malaza be amin'ny fananana fampiasa be dia be miaraka amina tombony be dia be amin'ny tranga maro raha mbola ampiasaina tsara izany.
Izy io dia fanafody tsy dia misy dikany loatra amin'ny aromatization amin'ny vatana, na izany aza, ny risika sy ny voka-dratsin'ny fampiasana azy dia mety ho mavesatra miankina amin'ny fomba fampiasana azy amin'ny tsingerina.
Matetika izy io no ampiasaina amin'ny fomba tsy mety amin'ny vehivavy mino fa anabolika maivana kokoa izy io, na izany aza, misy vokany virilizing amin'ny ambaratonga manomboka amin'ny salantsalany ka hatramin'ny avo, izany hoe, rehefa mijery mangatsiaka dia mazava fa mety tsy dia io ilay safidy mahaliana kokoa .
Ao amin'ny andalana manaraka dia hiresaka momba ny toetra mampiavaka an'i Stanozolol sy ny fampiasana azy amin'ny tsingerina isika, fampahalalana tena ilaina ho an'ny olona izay mihevitra ny mety hampiasana an'io anabolika io amin'ny tsingerina mikendry ny hahazo ny hozatra.
Inona ny Stanozolol?
Io dia anabolika novokarin'ny orinasa mpamokatra fanafody Winthrop tany amin'ny taona 60 sy ny fampiasana fitsaboana natao hikarakarana ny ankamaroan'ny tranga hypogonadism, fisorohana ny osteoporosis, sarcopenia ary stimulator mihinana sakafo.
Ny fivarotana lehibe azy dia nampiasa ny anaran'i Winstrol ary tena nahomby, nampiasaina be tamin'ny fanatanjahantena mba hampitomboana ny fahombiazana, hahazoana tanjaka ary hanatsara ny toe-batana amin'ny ankapobeny, na izany aza, noho ny hadalana dia najanona ny famokarany.
Stanozolol dia iray amin'ireo anabolika azo avy amin'ny Dihydrotestosteron (DHT), noho izany, manana fananana anabolika izy ary indrindra androgenika matanjaka, izay mametraka izany ao anaty sokajy tsy dia mahaliana loatra ho an'ireo tsingerina ataon'ny vehivavy.
Izy io dia an'ny fianakavian'ny zava-mahadomelina 17-AA (Alfa Alquelate) ary noho io antony io no anaovana metabolisma ao amin'ny atiny, izay poizina ho an'ny taova.
Azo alaina amin'ny tsindrona tsindrona izany ary koa amin'ny takelaka, izay samy ampahany amin'ny fianakaviana iray ary manana ny metabolisma mitovy ao amin'ny vatana.
Satria Stanozolol dia tsy karazana testosterone, fa azo avy amin'ny DHT, ny vatana dia mazàna mampihena ny famokarana testosterone endogenous mandritra ny fampiasana ny zava-mahadomelina, izay na dia amin'ny doka kely aza dia mety hahatratra 50% mora foana io fihenam-bidy io.
Noho izany, ny vokatra hafa mifandraika amin'ny haavon'ny testosterone ambany dia mety hiaina mandritra ny fotoana fampiasana Stanozolol.
Inona avy ireo tombony azo amin'ny fampiasana Stanozolol?
Ny toetra mampiavaka tombony lehibe indrindra mandritra ny vanim-potoanan'ny fampiasana an'ity anabolika ity dia tombony mivaingana sy matevina miaraka amin'ny fihazonana rano kely na tsy misy, noho izany, manana fanafody manana hery anabolika lehibe isika.
Na dia ampiasaina irery aza, Stanozolol dia manatsara be loatra ny syntetika proteinina ary manova ny fizotran'ny fanarenana ny hozatra.
Na dia tsy dia ampiasaina firy aza izy mandritra ny vanim-potoana mibontsina, Stanozolol dia manana fahaizana mandrisika ny fitomboan'ny fahazotoan-komana.
Ankoatr'izay, miteraka fanatsarana ny hakitroky ny taolana sy ny fitomboan'ny hakitroky ny hozatra amin'ny ankapobeny, izany hoe, amin'ny ankapobeny, ny lafiny lehibe rehetra amin'ny fiovan'ny hatsarana dia nohatsaraina tamin'ny alàlan'ny fampiasana an'io steroid anabolika io.
Rehefa ampiasaina amin'ny fanomanana na fanesorana dingana dia manampy amin'ny fitazonana ny hozatra miaraka amin'izay fa ny fampihenana ny tsiranoka voatazona, satria fanafody manome tombony maina izany.
Ny fahaizan'ity anabolika ity dia ny fitomboan'ny tanjaka, izay manaporofo fa tena mahomby amin'ny fampitomboana ny enta-mavesatra amin'ny fiofanana sy amin'ny fanaovana fanazaran-tena amin'ny hery lehibe kokoa.
Ny tombony azony dia azo tsikaritra haingana, satria zava-mahadomelina izay manana antsasaky ny fiainana ary noho izany antony izany dia mila fampiharana mihoatra ny iray isan-kerinandro amin'ny kinova tsindrona ary na dia ny doka isan'andro aza amin'ny dikanteny am-bava.
Ahoana ny fampiasana Stanozolol tsara?
Azo atao ny mividy an'io anabolika io amin'ny alàlan'ny fivarotam-panafody mitambatra, raha mbola ampiasaina amin'ny alàlan'ny dokotera.
Ny fampiasana fitsaboana Stanozolol dia mikendry ireo olona mitady hampitombo ny hakitroky ny taolana sy ny habetsaky ny hozatra, amin'ity tranga ity, ny manam-pahaizana momba ny endocrinologist dia tokony horesahina amin'ny fomba marina.
Androany, misy kinova maro amidy amin'ny laboratoara ambanin'ny tany, izay tsy ahafahana mahazo fahatokisana na amin'ny resaka fifantohana, na ny fatra mety ary ny sisa.
Noho izany, ho an'ny tsingerina iray hatao tsara, ny tolo-kevitra tsara indrindra dia ny mamaritra ny protokol miaraka amin'ny endocrinologist matihanina.
Araka ny efa voalaza tetsy aloha, ity anabolika ity dia azo alaina am-bava ary koa tsindrona, izay samy avy amin'ny fianakaviana 17-AA ihany.
Ny dikan-tsindrona dia azo jerena amin'ny vahaolana aqueous, na menaka, izay misy ny faharoa manana olana lehibe kokoa hita ao amin'ireo kinova voalohany.
Injectable Stanozolol dia manana antsasaky ny fiainana izay misy ny fampiharana mahazatra indrindra isan'andro.
Na izany aza, ny kinova am-bava dia manana antsasaky ny fiainana 6 ka hatramin'ny 8 ora ary mila omena intelo isan'andro, ankoatry ny fitakiana fatra avo kokoa raha ampitahaina amin'ny iray azo tsindrona.
Izany hoe, tombanana fa ny Stanozolol am-bava dia manana fatiantoka hatramin'ny 30% raha ampitahaina amin'ny kinova tsindrona, izay mampitombo ny fahasimban'ny atiny ary koa ny voka-dratsy mifandraika amin'izany.
Ny tsingerina miaraka amin'ity mpitsabo anabolika ity dia matetika mampiasa 20 ka hatramin'ny 80mg isan'andro amin'ny kinova tsindrona, amin'ny fikajiana ireo fampiharana isan'andro hafa.
Ho an'ny kinova am-bava dia zava-dehibe ny fiheverana ny fahaverezan'ny hatramin'ny 30% amin'ny fifantohana zava-mahadomelina ka azo atao ny mamaritra ny fatra mety.
Ireo fitambarana sy ny tsingerin'ny Stanozolol
Satria fanafody mampihena ny testosterone ao amin'ny vatana izany rehefa ampiasaina, matetika ny mpampiasa dia mampiasa karazana testosterone (base testosterone) ho an'ny tsingerina, toa ny Deposteron na Sustanon.
Ny famoretana ny axis hormonal dia tsy dia avo loatra, na izany aza, misy fatiantoka famokarana endogenous ary noho izany antony izany dia ilaina ny manao TPC (fitsaboana aorian'ny tsingerina).
Matetika ny tsingerin'ny Stanozolol dia manodidina ny 8 ka hatramin'ny 12 herinandro amin'ny kinova tsindrona ary manodidina ny 4 ka hatramin'ny 6 herinandro amin'ny kinova am-bava, satria amin'ity tranga ity dia misy poizina kokoa amin'ny aty satria mila habe betsaka kokoa hahazoana tombony mitovy amin'izany.
Na dia zava-mahadomelina izay misy fiatraikany antonony aza amin'ny axis hormonina, dia misy fiatraikany izay mety miovaova be arakaraka ny fatra ampiasaina sy ny faharetan'ny tsingerina.
Raha ampitahaina amin'ny zava-mahadomelina hafa, dia maivana kokoa ny laniny, na izany aza, ilaina hatrany ny fitandremana sy ny fitandremana amin'ny tsingerin'ny Stanozolol.
Jereo eto ambany ny vokatra lehibe ateraky ny tsingerina miaraka amin'ity mpitsabo anabolika ity:
Mitete amin'ny testosteron: Stanozolol dia derivative DHT ary noho izany antony izany dia mampihena ny famokarana voajanahary ny vatana, miteraka 50% farafahakeliny
Vokatry ny androgène: mety hiteraka voka-dratsy toy ny mony, mony, fihenan'ny menaka amin'ny hoditra, fihenan'ny volo
Mitete amin'ny libido: ny voka-dratsy ateraky ny fihenan'ny testosterone ao amin'ny vatana
Fihenan'ny kolesterola HDL mahery: Ny fampiasana Stanozolol dia manimba ny mombamomba ny lipidin'ny vatana, izay mampihena ny kolesterola HDL tsara, mampitombo ny LDL ratsy.
Fanaintainana iraisana: ny tatitry ny mpampiasa dia mampiseho fa ny bisikileta miaraka amin'i Stanozolol dia mety hiteraka fihenan'ny fihenan-tsakafo, izay mety hampitombo ny risika
Fanimbana ny atiny: satria zava-mahadomelina ao anatin'ny fianakavian-17-AA io, dia miteraka atiny ao amin'ny atiny ary noho io antony io dia miteraka fahasimbana amin'ny taova, izay mahatonga ny fampiasana azy tsy ho vita mandritra ny fotoana maharitra.
Mihabetsaka ny fahazotoan-komana: Vokatry ny fitomboan'ny fahaizan'ny anabolika amin'ny vatana, izay mety ho ratsy mandritra ny fotoana mifantoka amin'ny fahaverezan'ny tavy amin'ny vatana na fampiasan'ny olona misakafo be
Prostate miharihary: Ny tena anabolika dia miorina amin'ny hormonina DHT
Fanaintainana mandritra ny fampiharana: satria vahaolana aqueous amin'ny sira, ny fampiharana Stanozolol dia maharary ary mety hiteraka abscesses sy mamaivay ao amin'ilay faritra, noho izany dia ilaina ny mitady fitsaboana haingana.
Ny fampiasana stanozolol amin'ny vehivavy
Ity dia zava-mahadomelina izay manana potika androgen antonony, na dia be mpampiasa any Brezila aza izy io, tsy isalasalana fa tsy safidy tsara amin'ny ankamaroan'ny tranga.
Satria, mety hiteraka vokan'ny virilization haingana amin'ny vehivavy izany, na dia amin'ny fatra kely aza.
Raha ny fahitana azy, ny doka eo anelanelan'ny 20 sy 50mg isan'andro amin'ny Stanozolol dia ampy hahatonga fiovana ara-batana voajanahary, koa mitandrema tsara amin'ny fampiasana azy.
Mety hiteraka voka-dratsy toy ny:
Menaka hoditra mihabe
Fitsapana Doping any Stanozolol
Ity steroid anabolika ity dia iray amin'ireo mampiady hevitra indrindra amin'ny resaka doping amin'ny fanatanjahantena, satria i Ben Johnson, sprinter tompon-daka, dia tratra tamin'ny Lalao Olaimpika 1988 rehefa nampiasa steroid tamin'ny fikarohany izy.
Ny fikojakojana ara-batana izay omen'i Stanozolol dia tena malaza, na izany aza, amin'ny tranga fampiasana hampitomboana ny fahombiazan'ny fanatanjahantena dia mila mitandrina tsara ny fampiasana azy.
Mba hahazoana tolo-kevitra tsara kokoa hampiasaina amin'ity tranga manokana ity dia asaina mitady mpikaroka endocrinology.
Satria io dia zavatra iray noraran'ny komity an'ny fifaninanana fanatanjahan-tena rehetra.
Anaran'ny molecular: [17beta-Hydroxy-17-methyl-5alpha-androstane [3,2-c] pyrazole]
Teboka: N / A
Mpanamboatra: (Tany am-boalohany) Sterling
Noforonina tamin'ny: 1962
Dosis mahomby (lehilahy): 50-100mg / andro
Dosis mahomby (vehivavy): 2.5-10mg / andro
Antsasaky ny fiainana: 8 ora
Fotoana fikarohana: 3 herinandro (am-bava) ka hatramin'ny 9 herinandro (tsindrona)
Ratio Androgenic / Anabolic: 30: 320
Stanozolol dia steroid iray mety misy fiovana tsara, fitomboan'ny hozatra ary famaritana ny vatana, izay ahafahany mampiroborobo tombony haingana sy maina.
Na izany aza, ny fampiasana azy dia misy andian-tsipiriany manokana izay tsy maintsy raisina mandritra ny fizotry ny fampiasana zava-mahadomelina.
Satria izy io dia derivative DHT, dia mety hiteraka voka-dratsy marobe ary, ho fanampin'izany, dia zava-mahadomelina misy potika androgen antonony, izay mahatonga azy io tsy dia mahaliana loatra amin'ny fampiasana vehivavy.
Ny herisetra amin'ny axis hormonal dia salan'isa, na izany aza, mbola anolorana fanaraha-maso ny fampiasana azy ho an'ny endocrinologist mba hahazoana ny fampiasana tsara indrindra ny tsingerina natao tamin'ny zava-mahadomelina.